Henry James. Chirangaridzo cherufu rwake. 5 enganonyorwa | Zvazvino Zvinyorwa
Henry James. Chirangaridzo cherufu rwake. 5 enganonyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, dzakawanda
Henry James akafa zuva rakaita sezuva ra 1916 muLondon. Inozivikanwa seimwe yeiyo vanyori vakuru venyaya dzenhau dzazvinoAivewo mutsoropodzi uye munyori wemitambo. Kukuyeuchidza iwe, uku kuongorora kwe 5 ake makuru enganonyorwa izvo zvakagadziridzwawo kumabhaisikopo: Mufananidzo wemukadzi, Bostonia, Imwe kumonyoroka, washington square y Mukombe wegoridhe.
2 Mufananidzo weMukadzi (1881)
3 Ivo bostonia (1886)
4 Imwe Shanduko yeScrew (1898)
5 Mukombe weGoridhe (1904)
Vanodaro nharo yenyaya iyi ndeye based mune imwe anecdote uyo akataura kwaari amiga about hama yake, muvhimi uyo akanga asvika mukadzi akashata uye ane bland musikana asi mugari wenhaka yababa vaizomunyima pfuma yake kana akamuroora. Henry James akafunga nezvazvo pakutanga kunge nyaya, asi yakanga ichirebesa kusvikira anyora a novel.
La firimu vhezheni inyanzvi yaakatungamira William wyler en 1949. Vanyori vayo vakuru (Olivia de Havilland uye Montgomery Cliff) akarovera mavara ekunyora aJames mukuturikira izvo, semuenzaniso, Havilland yakashuma a Oscar mubairo semutambi akanakisa.
Mufananidzo wemukadzi (1881)
Pamwe basa rake rine mukurumbira pamwe Imwe kumonyoroka. Nyeredzi Isabel museve, mukadzi wechidiki akangwara uye anozvikudza uyo anoenda kuEurope mushure mekuramba a Chirungu nobleman kuitira kuti usarasikirwe nerusununguko rwako. Nechekare muEurope, ramba zvakare kune mumwe mukwikwidzi, a wemunyika ndiani akamutevera achipesana nezvaanoda. Imwe hama yake, Ralph, ari mukwikwidzi wechitatu asingatauri rudo rwake nekuda kwehutano hwake husina kutsarukana. Pakupedzisira Isabel anoroora a American a muimbi anotadza kubudirira muunyanzvi, nemari shoma uye mwanasikana mudiki, Pansy, akarererwa mumusha wemamongi.
Yakaendeswa kumamuvhi mune shanduro yaJane Campion uyo akatungamira mukati 1996 game Nicole Kidman y John malkovich seva protagonists.
Nyeredzi Olive chancellor, mukadzi asina murume anga atora chisarudzo chitsva che kodzero dzevakadzi muUnited States. Yake Kufuridzirwa kwaive kutaura kwemukadzi wechidiki, Verena tarrant, uye Olive anomuita mutauriri wedzidziso yake. Verena, ndinotenda, anorarama uye anofamba naOlive uye anoda kuramba akavimbika kwaari, kunyangwe yaOrive aine hunhu uye achiedzesera ne mubatanidzwa muhondo akadanwa Basil ramsom.
Su kugadzirisa firimu akamhanya achiona James nyanga dzenzou en 1984 uye mukati maro mune Vanessa Redgrave, Madeleine Potter naChristopher Reeve. Kunyangwe paine mamwe mavhezheni, senge akateedzana paRTVE kubva 1978.
Imwe kumonyoroka (1898)
Yake inozivikanwa chipoko nyaya. Ndiine protagonist uyo ari mukadzi wechidiki anosvika kuimba yeBly kuti ave mutariri waFlora naMiles., vana vaviri vakaitwa nherera uye pasi pekudzidziswa nababamunini, muridzi wemba. Nenguva isipi tsvaga izvozvo vana vanoshanya nguva nenguva murume nemukadzi vakafa gore rapfuura. Mai Grose, muchengeti wemba, inokuudza kuti vaive ani: Peter quint, valet babamunini vevana; Y ndapotsa jessel, wekutanga preceptor. Kufungidzira chero yakaipa vavariro yavanogona kuve nayo, wechidiki governess anosarudza kudzivirira vana kuita zvisingaite.
La kugadziridza kwekupedzisira iye akangozviita kuscreen hombe Steven Spielberg en iyi vhezheni iyo inovhura muna Kubvumbi.
Mukombe wegoridhe (1904)
Ivo protagonists ndivo Maggie Verver nababa vake chirikadzi, vanhu vaviri veAmerica vakapfuma kwazvo vakagara muEngland. Maggie anoroora mutongi weItaly, Prince Amerigo, uye vatatu vanogara pamwe chete vachifara kusvikira mwanasikana nababa vagutsikana izvozvo zvirinani kuti akafirwa aroore kana kuroorwazve. Ndichazviita na Charlotte akasimba, mukadzi anoita kunge mukadzi akakodzera kwazvo. Izvo zvavasingazive ndezvekuti kwaive nehukama hwekudanana pakati paCharlotte naAmerigo pamusoro, izvo zvinoita Maggie godo. Asi netsaona isingawanzoitika kutenga komichi yegoridhe izvo zvakaunza vaimbove vadikani pamwechete, Maggie achaziva chokwadi.
Ndakamutora kuenda kumamuvhi otra vez James nyanga dzenzou en 2001ne Uma Thurman, Angelica huston uye James Fox pakati pesimbi yaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Henry James. Chirangaridzo cherufu rwake. 5 enganonyorwa
5 nhau dzaKurume. Nhema nhema, nhoroondo, chinyorwa ...
Mufananidzo waDorian Grey